More Okooko Osisi Na-ese Iji Dasị Maka Ọdịdị Digital Artwork
Okechukwu Ikwerre September 4, 2020 March 23, 2021
10 Wonderful Okooko Osisi sere naanị David Bridburg
Malite ọrụ ọhụrụ nwere ike ịba uru. Aghọtara m nke ahụ. Agbaji ihe n’ime obere iberibe. Mee ka ọ dị mfe. Tinye otu ụkwụ n'ihu nke ọzọ.
Emere m nke ahụ. Ugbua afọ ole na ole gara aga, enwere m ọrụ aka ọrụ 400. Site mbido ka ọkachamara ndị a okooko osisi sere si mfe ime ka ihe mgbagwoju.
Akụkọ m dị iche. Ya mere nka m di iche. Anaghị m anọdụ ala. Ọrụ iri m ga - egosi gị nwere akụkọ na - atọ ụtọ.
Aha m bụ David Bridburg. Abụ m Post Modern artist. Akụkọ m na-agụnye nkwarụ ọmụmụ. Nsogbu m bu na enweghi nsogbu nhazi ihe. O nwere ike ịbụ na ị nwere onye ezinụlọ unu ma ọ bụ ezigbo enyi gị na-amụta ihe.
Okpuru-obi onye ìsì ahụ ka elu. Ihe dị ka nke ahụ bụ ya mere m ji bụrụ onye na-ese ihe.
Enwere m ike ịdaba na nka na kọleji, enwere m obi ụtọ ịnọ na klaasị ndị ahụ. N'ịra na nkuzi m ka ọ bụ ogbo, amagidere m onwe m. Onye isi prọfesọ hụrụ ya n'anya.
Ihe omumu bu nke kachasi. Amaghị m nke ahụ n’oge ahụ. Enyere m ngwa ọrụ okike na enweghị iwu.
Ugbu a ọ bụrụ na ịlele ụwa nka mara mma nke New York City, anyị maara na ọtụtụ n'ime ya enweghị isi. Ajụjụ na-ebilite, ọ bụrụ na ị kwụgidere n'ụzọ ụfọdụ ọ ga-anọ na mgbidi?
Emere m mbipụta m maka mkpa gị. Ebum n'uche m nwere ubochi ubochi nke echiche ndi mbu. O doro anya na echiche mbụ bụ ọkwa dị iche iche na ọrụ m ọ bụla.
Bọchị ndị a, ana m ere ụdị ifuru m dị ka akwụkwọ mmado na mpempe akwụkwọ.
Ihe oyiyi ndị a sitere na okooko osisi. Dị ka ihe dị mfe nnweta okooko osisi gbasasịa gafee ebe nrụọrụ weebụ m, lee nke m Roses na Ifuru Mkpokọta.
Intro na van Gogh
Ngwakọta 16 van Gogh nke David Bridburg
Nwere ike ịmata nke a ma ama na Roses na Irises nke Vincent van Gogh. Ahụrụ m ibe ahụ n'anya.
Dị ka Post Modern onye na-ese ihe na-eji eserese nke okooko osisi, aghaghị m ime ihe m. Iji nwaa otuole si mee ka eserese ruo ugbua na ime ya, m kwusi, o di nma? Be bụ onyeikpe.
Ọtụtụ n’ime unu ga-ahụ nke a n’anya. Ọtụtụ mmadụ na-ahụ weebụsaịtị m, ma na-ahụta nka m na-atọ ụtọ. Nke ahụ bụ isi. Ga na ụzọ ọhụụ ọhụụ na-atọ ụtọ.
Anọ m ọdụ na klas m na-arụ ọrụ na ụzọ ọhụrụ. Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na 1990, n’afọ 2006, amalitere m imeghe ihe ịma aka ọhụrụ ahụ.
Ridegba ịnyịnya m abụrụla ihe ọchị. Ga-ahụ ụfọdụ ihe atụghị anya.
Next Gauguin, na Ihe A Na-atụghị Anya Ya
O nwere ike ịbụ na ị hụla rose na petal nwere agba dị ka egwurugwu, mara mma ma dị mfe.
Ọ bụ ezie na ị hụbeghị mbụ, ana m eji 15 Paul Gauguin eserese nke ọ bụla egbutu iji daba dị ka petal.
“Tis mana aha gị nke bụ onye-iro m;
Gi onwe gi bu ezie na abughi Montague.
Gịnị bụ Montague? O, be aha ozo!
Gịnị bụ aha? nke anyị na-akpọ rose
Site Aha ọ bụla ga-esi isi dị ụtọ;
So Romeo would, ma obughi Romeo ka akpo ya,
Jide ezigbo n'anya nke zuru oke o ji
Enweghị aha ahụ. ”(Romeo na Juliet, Act-II, Scene-II, Usoro 38-49)
Cannye pụrụ iguzogide ntakịrị Shakespeare?
Ọ bụrụ na ị pịa na onyonyo a ị na-ada na "Ifuru na Roses Collection". E nwere ụdị atọ nke "Rose nke Gauguin" nke m ga-achọ ka ịlele. Can nwere ike izuike ma hụ mkpokọta niile site na ebe a karịa iko kọfị.
Rose nke Gauguin nke David Bridburg dere
Na-arịọ maka njikwa banyere ihe m na-ekwu site na Post Modern?
Zọ kachasị mfe, ụzọ doro anya iji kọwaa postmodernism, ihe niile emeela tupu. Site na iwere ihe gara aga, anyị na-emepụta ihe ọhụrụ. O bu ihe aturu. Anyị na-agbanwegharị ụbọchị ugbu a.
Vinbịakwute Vincent van Gogh
Ga-achọpụta na van Gogh bụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị kachasị amasị m. Ighaghari ihe ndi ozo bu ihe bu isi na-aru oru m.
Nkwupụta ahụ dị mwute, Vincent van Gogh ereghị eserese ya ọ bụla n'oge ndụ ya. Na nke a, ịntanetị na-enyere m aka ire echiche m. N’ịtụle afọ mbụ m nọrọ n’ụlọ akwụkwọ elementrị nwere nsogbu ime nnyocha, anaghị m ewere ịmebe nka na ịre ahịa nka dị ka obere ihe.
Mepụta ụdị ọrụ dị iche iche abụwo ezigbo echiche nye m. Amaghị m ihe ị ga-ahụ n'anya. Offọdụ n'ime Mbipụta ndị mmadụ azụrụ, echere m na ha agaghị ere. Ihe ndị ọzọ m chere ga-ewu ewu erebeghi. Naanị gị nwere ike ikpebi ihe ị ga-ahụ na ọrụ nka.
Layered 4 van Gogh nke David Bridburg dere
Echere m na nke a ga-ere. Ndị ọzọ na-ese ihe gwara m na nke a mara ezigbo mma. Mmadu ole na ole agwala m na o di ebube. Nibble enweghị aru.
Ka o sina dị, ana m enweta afọ ojuju dị ukwuu site na ịmepụta ihe. Na njedebe, ọ abaala uru.
Obere mpempe akwụkwọ nke abstraction mejupụtara dum. Ọbụna mgbe a bịara n’ihe osise ihe atụ.
I nwere ike zuru ike nọdụ ala ma nwee ọ theseụ n'ọrụ ndị a. Nke ahụ bụ ihe m chọrọ. Nke a blog pụtara ịbụ ọgụgụ ọgụgụ.
O zuru ezu ikwu, m ga-ekwupụta "mwepu" n'ihi na ị sitere na abstraction nke van Gogh na kọmputa pixel kọmputa ndị a bụ ngwaọrụ m.
Ka m na-arụ ọrụ nka site na ọrụ aka, amalitere m iji ngwa ọrụ dijitalụ rụọ ọrụ na-enweghị ọrụ ebube. M ga-etinye ụfọdụ n'ime mpempe ọhụụ ndị a.
Egwu egwu 3 site n'aka David Bridburg
Nwere ike ịhụ na enweghị m otu palette agba. Bipute nka n’oge a enweghi ezi otutu agba. Emere m nke m. Onekpụrụ m na-eduzi bụ iji kwekọọ na ụda nke agba ọ bụla na mpempe akwụkwọ enyere.
Site n'inwe mmasị gị na okooko osisi, ị bịara na blọgụ a iji hụkwuo ngosipụta nyocha. Mana tulip kwesịrị ịnọgide na-abụ tulip n'ụdị.
Gị yi fluted champeenu iko. Ana m abanye n'ime ihe dị mkpa nke ifuru, mana ugbu a, enweghị mkpụrụ ndụ.
Abstract Flower 2 nke David Bridburg
Nke a obere usoro nke abstracts atọ nnwale na rụrụ kọmputa imewe. Ma ngwa dijitalụ bụ ezigbo.
Drawinglọ akwụkwọ ihe osise izizi m lekwasịrị anya n'ịtọpụ. Vingmegharị ogwe aka site n'ubu iji mepụta ihe oyiyi. N'adịghị ka nkwojiaka.
Ikiri ihe osise si n'oge gara aga na ndị na-adịbeghị anya ọgbọ, m ghọtara mkpa ọ dị maka dijitalụ ọrụ na-rụrụ.
Nke a ghọrọ ihe ịchọ mma ọhụụ. Fraị na matị, ihe onyonyo ndị a mara mma.
Ikpeazụ Twist na Atọ
Green chọta ebe obibi. Anyị bi na mbara ala nwere ahịhịa ndụ. Shades nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ihe ndozi na-agbanwe ka ọtụtụ iri afọ na-enwe ọganihu.
Ojiji a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ihe pụrụ iche, na-arịọ ajụjụ, “nke a sitere na mmalite afọ ndị 1970? Nakwa ike ifuru? ” Ọfọn, mba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a dị iche na nke ugbu a.
Ana m arụ ọrụ iji jiri ọhụụ ọhụụ mee gị obi ụtọ maka ihe ndozi.
Abstract Flower 3 nke David Bridburg
Mee ka m mara ka ị si lee onyonyo a. Onye obula n’ahu agba di iche.
A na-enwe ekele maka nzaghachi gị. Ndị mmadụ meghere ụwa nke nghọta nye m ọtụtụ afọ.
Kedu Ka Ọ Ga-esi Hapụ?
“M tawt m taw a puddy tat. Emere m, m mere ”- Tweety odo canary.
Ifuru Ifufe nke David Bridburg dere
M na-enye gị serendipitous. Egwuregwu dị ọcha, enweghị m ike ịnweta ihe ọ bụla nwere ihe oyiyi kọmputa.
Ikuku ebuliwo elu, ma were gị pụọ. Otu enyi m metụtara foto a dị ka nnukwu enyemaka mgbakasị ahụ. Ọ na-ele anya mgbe niile na agba mmanụ maka obere furry.
Ọ bụ n'ezie ezigbo enyi na-atọ ọchị. O kokwasịrị kwaaji ″ 48 nke onyonyo ndị a n’elu mgbidi gafere ebe ya na-amụnye ọkụ. Pre Covid, ndị enyi ya ga-akwụsị wee sị, “nke ahụ bụ pusi”, na-atụ aka na etiti ifuru?
Nzaghachi ya, “naanị ya maara ma ọ bụrụ nwamba”, jiri ntabi anya n’anya ya.
Otu n'ime ezigbo ndị enyi ya gara saịtị m ịzụta ihe oyiyi a, mana zụtara ihe m ga-egosi gị ọzọ….
Ihe Osisi Dijitalụ Osisi
Pụrụ ịhụ na nke a ahịhịa m. Ana m agba agba. Mgbakwunye njikwa bụ agba nke oghere na-adịghị mma m, ụzọ dị mma isi kwuo ndabere.
Iji blues nwere ike gbasaa omimi n'ime ebighi ebi. Dị ka igwe na-acha anụnụ anụnụ nke na-agabiga mbara igwe.
Uhie Red site David Bridburg
Na-ekwu okwu dị ka Dave, ọ bụghị dị ka onye na-ese ihe, acha anụnụ anụnụ a nwere njide n'aka m. Dijitalụ ịhọrọ agba adịghị mfe. N'ịmara ihe m chọrọ ịbanye, enweghị m mkpa ịgagharị na agba swaths.
Na-emebi emebi site n'aka David Bridburg
“Jide minista nkeji! Ndị ahụ bụ otu onyonyo abụọ ”, a na m anụ ka ị na-ekwu ya ugbu a.
Ee, m na-arịọ gị ka ikpe mara gị. LOL
Lezienụ anya nke ọma na Fragile, ịpị na-eweta onyonyo onyonyo na weebụsaịtị m. E nwere aesthetic mma ị pụrụ ịhụ. Grays na-ekpo ọkụ.
Enwere ikike ngosiputa na onyonyo a. Obi ọmịiko nke ruru gị n'obi.
Apropos, anam ahapuru gi na ihe okike ikpeazu.
Ndụ nke ọnwụ site n'aka David Bridburg
Papa m hụrụ ihe oyiyi a n'anya ozugbo. Ihe bara uru gbasara ndụ. Nye m nke ahụ bụ ụgwọ ọrụ.
Emegharịrị m Vincent van Gogh's Roses na Irises ọtụtụ oge. Ihe onyonyo a ka o buru ibu okwu.
Alaghachi na ndezi na-enye gị ụfọdụ nke m nzaghachi, papa hụrụ n'anya na-kwuru m na isiokwu. Mama m chọrọ ịzụta "Ifuru na Ifufe", na nwamba ahụ. Mama bụ onye nkịta. Ihe a juru m anya.
Hụla echiche dijitalụ ịgbanwe nka. Varietydị aesthetics dị iche iche sara mbara nke ukwuu.
Echiche m gbanyere mkpọrọgwụ na ọdịbendị anyị. Ọ bụrụ na ịzụ ahịa maka nka ị nwere ike ịchọrọ mmụọ nsọ ọhụụ. Ọganiihu ebe a bụ ịlọ ụwa, mmeghari ohuru nke nka na ndu.
Onwere ihe omume omenaala puru iche nke na eme na nka di nma, echiche dijitalụ v eserese mbu. The artworld, ma ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụghị, na-ada ụda site na ndakpọ na ụwa gallery. Na veranda na-na a na ọnwụ nke otú e si ere dijitalụ nkà.
Zọ ahụ bụ maka onye na-ese ihe, mụ onwe m, were ehi ahụ site na mpi, pịa gị n'ubu wee sị, "Lee m". Nzaghachi nye isiokwu m dị ọkụ ma na-akwado.
Ndị na-achịkọta ihe azụtawo ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị. Otu di na nwunye na New York City zụtara “Amamihe America”Izu abụọ gara aga maka ime ụlọ ha. Mpempe akwụkwọ ahụ bụ nkwupụta doro anya maka ịha nhatanha agbụrụ. Naanị ya nwetara ya. Mbipụta nke a bụ 84 ″ canvas mural.
Gịnị bụ ihe na-akpali mmasị banyere oge anyị, na nke a dijitalụ afọ, na-Mbipụta nwere ike increments malite na 8 nging sitere na 108 ″. Mbipụta 84 ″ dabara ohere ha n'ụzọ zuru oke.
Site n'ụzọ, American Intellectual Collection bụ Post Pop artwork. Dị kachasị maka nchịkọta m niile bụ Postmodernism.
Achọrọ m ịhapụ gị echiche, mmetụta, na echiche nke njedebe dị mma dị n'ịntanetị site na mụ onwe m na ndị ọzọ na-ese ihe. Nwere ike ịchọta aesthetics dijitalụ nke masịrị gị ma daba n'ụdị ndụ gị.
Pịa na ihe oyiyi ọ bụla nke ịchọrọ iji hụ ihu ahịa ihe oyiyi na weebụsaịtị m (anaghị emetụta ihe mkpuchi mkpuchi na elu).
Ajụjụ: O mezuola ya? Azịza ya pụrụ iju gị anya.
Mbipụta AkwụkwọBipute Osisi ohuruEdee